ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းကလည်း ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနဲ့ မမကြူတို့က ငွေကျပ်သိန်း၁၀၀လှူ တဲ့အတွက် အထူးကိုကျေးဇူးတင်……. – Shwe Naung
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းကလည်း ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနဲ့ မမကြူတို့က ငွေကျပ်သိန်း၁၀၀လှူ တဲ့အတွက် အထူးကိုကျေးဇူးတင်…….
N N | October 15, 2021 | Knowledge | No Comments
ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များကိုစ.စ်ကောင်စီကေ ငွပေးစည်းရုံး။အာ.ဏာသ.ိမ်းစ.စ်ကောင်စီအကြ.မ်းဖက်အဖွဲ့ကရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကိုကျပ်သိန်း၁၀၀ လှူဒါန်းခဲ့သလို သက်ကြီးရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ ကြေးကျပ်၁၀သိန်းနဲ့ကြက်ဥ၊ဆန်၊ဆီ၊တွေပေးပြီ စည်းရုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
စ.စ်ကောင်စီထံကထောက်ပံကြေးလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ သက်ကြီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဒေါ်ပုလဲက“နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီလိုမျိုးပံ့ ပိုးပေးမယ်ဆိုတာလုံးဝ မထင်ထားဘူး။
မျှော်လည်းမျှော်လင့်မထားဘူး ပေါ့နော်။အိမ်ကိုတပ်မတော်အရာရှိနဲ့အဖွဲ့ရောက်လာ ပြီးထောက်ပံ့ကြေး ကျပ်ငွေ၁၀သိန် း၊ဆန်တစ်အိတ်၊ဆီနဲ့ ကြက်ဥအလုံး၅၀လာပြီးထောက်ပံ့တော့အံ့ဩဝမ်းသာဝမ်းနည်းကြီးဖြစ်သွ ားတယ်။
”လို့ပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ၁၃ရက်မနက်ကဗဟန်းမြို့နယ်ဝင်္ကပါ လမ်းရှိမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာမှာပြောကြားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကပုံမှန်ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးက ဦးဆောင်ကာရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်အသိုက် အဝန်းကမိသားစုတွေသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း စည်စည် ကားကားကျင်းပ လေ့ရှိတာပါ။
အခုနှစ်မှာတော့ (၄၄)ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုအာ.ဏာသ.ိမ်းစ.စ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ အပေါင်းပါတွေနဲ့သက်ကြီးရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်တချို့သာတက်ရောက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
စ.စ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အုန်းကရုပ်ရှင်ရုံတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီ းရုပ်ရှင်အနုပညာတွေပြန်လည်လုပ်ကိုင် နိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးနေကြောင်းနဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရုပ်ရှင် နယ်ပယ်ကိုစ.ွန့်ခ.ွာသွားကြသူတွေအတွက်စ.ိတ်မေ.ကာင်းဖြစ်ရကြောင်းပြောပါ တယ်။
နေပူပူ ထဲက ရေသန့်ဗူး ကိစ္စ
၉ ရက် လုံးလုံး နားထဲမှာ ပိုးဟပ်ဝင်နေတာကိုတောင် မသိတဲ့ မိန်းကလေး
ကိုဗစ် အစ အိန္ဒိယက ’ဖြစ်ကြောင်း တရုတ် ပညာရှင်များ အချက်အလက်များဖြင့် ထုတ်ပြန်
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အစောင့်အရှောက် ပုဂ္ဂိုလ် ရှိပါတယ်…သင့်ကို ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်ရှောက်နေသလဲသိချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ပါ
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ခက်ဝေမိုးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……..
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ အသည်းယားစဖွယ် ကောင်းပီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….
အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးပီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………..
အကိတ်စား ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ အထာကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………
ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် ရွှေရင်မွှာ အလှတရားများ ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…………
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား လိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….